အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုခြင်း - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on June 16, 2014 at 10:51 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ သဘောမတူကြောင်းကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောလိုတဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရတယ်၊ ဘယ်အခါမှအသုံးပြုရတယ် ဆိုတာကို သိထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဘာသာစကားတစ်ခု (သို့) ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမှာ စကားအသုံးအနှုန်းတစ်ခုဟာ ပုံမှန်အသုံး အနှုန်းဖြစ်ပေမဲ့ အခြားဘာသာစကား (သို့) ယဉ်ကျေးမှုအတွက်တော့ မယဉ်ကျေးသော အသုံးအနှုန်းဖြစ်နေနိုင်လို့ပါပဲ။
I'm sorry, Excuse me (သို့) Pardon me ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ဟာ အချက်အလက်တောင်းဆိုခြင်း၊ အနှောက် အယှက်ပေးခြင်းနှင့် သဘောမတူခြင်း အစရှိတဲ့ မတူညီသော အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ယဉ်ကျေးခြင်းကို ဖေါ်ပြရာတွင် သုံးနိုင်သော အသုံးအနှုန်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
Sorry / Excuse me, do you know what the time is? (တဆိတ်လောက်၊ ဘယ်နှစ်နာရီလဲဆိုတာ သိပါသလား?)
I'm sorry, but I don't see how you expect us to finish by lunch time. (စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျား။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး (ကျွန်တော်တို့ကို) ထမင်းစားချိန်အမီ အဆုံးသတ် စေချင်တယ်ဆိုတာကို သဘော မပေါက်ဖူးဗျာ။)
Excuse me, but I never said I'd pay for everything. (အားတော့နာပါတယ် ဒါပေမယ့် အားလုံးအတွက် ငွေရှင်းပေးမယ်လို့ ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှမပြောခဲ့ပါဘူး။)
Excuse me, but there'saphone call for you. (ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ၊ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားအတွက် ဖုံးလာနေပါတယ်။)
Excuse me foramoment, I have to makeaphone call. (ခဏလောက် ခွင့်ပြုပါဦး ကျွန်တော်ဖုံးခေါ်စရာလေးရှိလို့ပါ။)
Pardon me , but those numbers aren't right. (စိတ်မရှိပါနဲ့ ဒါပေမဲ့ အဒီဂဏန်းတွေက မမှန်ဘူး။)
Pardon me for interrupting, but there'saphone call for you. (နှောင်ယှက်မိတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားအတွက် ဖုံးလာနေပါတယ်။)
I'm sorry, Excuse me နဲ့ Pardon me တို့ကို တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သူပြောလိုက်တဲ့ စကားကို နောက်ထပ် ပြန်ပြောဖို့ ယဉ်ကျေးစွာ တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာလည်း အသုံးပြုပါတယ်။ Excuse me နှင့် Pardon me တို့ကိုတော့ အမေရိကန်စကားမှာ အဓိက အသုံးပြုပါတယ်။
Is this your coat? Excuse me/ Pardon me? (ဒါခင်ဗျားကုတ်အင်္ကျီလား? ခင်ဗျား/ပြန်ပြောပါဦး။)
I'm sorry , what was your name again? (စိတ်မရှိပါနဲ့ ခင်ဗျားနာမည်ပြန်ပြောပါဦး ။)
သင့်အနေနဲ့ ကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ဖို့ရာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ဘေးဖယ်ပေးဖို့ ယဉ်ကျေးစွာ တောင်းဆိုတဲ့အခါ Excuse me နှင့် Pardon me တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။ Excuse me သည် ဗြိတိသျှစကားအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး Pardon me ကတော့ အမေရိကန်စကားအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
I don't know, I see/take your point နဲ့ That's true တို့ကိုတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ အပြည့်အ၀မဟုတ်ပဲ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိသာ သဘောမတူကြောင်းကို ပြောလိုတဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
It'll be boring. Oh, I don’t know. It might be fun. (အဲဒါက ငြီးငွေ့စရာကောင်းလိမ့်မယ်။ အို မသိဘူးလေ ၊ ပျော်စရာကောင်းချင်လည်း ကောင်းမှာပေါ့။)
I see your point , but I don't think there's anything we can do at the moment. (ခင်ဗျားပြောတာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဘာမှ မလုပ်နိုင်ဘူး ထင်တယ်။)
With (the greatest) respect, with all (due) respect နဲ့ I beg to differ တို့ ကတာ့ တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ သဘော မတူကြောင်း ပြောတဲ့အခါမှာ အလွန်ယဉ်ကျေးပြီး ခန့်တဲ့အသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
With all due respect , you're missing the point. (လေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ၊ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားနားလည်မှု လွဲနေပါတယ်။)
He argues that young people would benefit from parenting courses, I beg to differ. (လူငယ်တွေဟာ သားသမီးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးသင်တန်းတွေကနေ အကျိုးကျေးဇူး ရနိုင်တယ်လို့ သူကတော့ စောဒက တက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ သဘောမတူကြောင်း ပြောပါစေခင်ဗျာ။)
Actually ကိုတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို သူနဲ့သဘောမတူကြောင်း ယဉ်ကျေးစွာ ပြောလိုတဲ့အခါ (သို့) ထိုသူကို အမှန်ပြုပြင်ပေးလိုတဲ့အခါ အသုံးပြုပါတယ်။
I find Jamesabit dull. He's actually very nice when you get to know him. (ဂျိမ်း(စ)က နည်းနည်းတော့ ငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သူနဲ့ရင်းနှီးလာတဲ့အခါ သူဟာ တကယ်တော့ သဘောကောင်းတဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။)
That Picasso is amazing. Actually it's by Braque. (အဲဒီပီကာဆိုရဲ့ အဲဒီပန်ချီကားက အံ့သြစရာကောင်းလိုက်တာ။ တကယ်တော့ အဲဒါဘရက်(ခ)ဆွဲတာ။)
I'm afraid ကတော့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်စေမဲ့ (သို့) စိတ်ပျက်စေမဲ့ (သို့) စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေမဲ့စကားကို ပြောရာတွင် အသုံးပြုသော ယဉ်ကျေးတဲ့စကား အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
Things haven't been going well here, I'm afraid. (စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီမှာတော့ အရာရာတိုင်းဟာ အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်။)
I'm afraid that I can't accept this job. (စိတ်မကောင်းပေမဲ့ ဒီအလုပ်ကို ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ပါဘူး။)
I'm afraid to say that I found the book very dull. (အားနာပေမဲ့ စာအုပ်က ပျင်းစရာကောင်းတယ်လို့ ပြောရမှာပဲ။)
Did he forget to do it? I'm afraid so. (သူလုပ်ဖို့မေ့သွားသလား? စိတ်မကောင်းပေမဲ့ ဟုတ်ပါတယ်။)
Will John be there? I'm afraid not. (ဂျွန်ရောအဲဒီမှာ ရှိမှာလား? စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။)
Macmillandictionaryblog.com မှ Liz Potter ၏ Ways of being polite မှ ကောက်နှုတ် ဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယျဘာသာစကားနဲ့ပွောတာပဲဖွဈဖွဈ တဈစုံတဈယောကျနဲ့ သဘောမတူကွောငျးကို ယဉျယဉျကြေးကြေး ပွောလိုတဲ့အခါ အသုံးပွုတဲ့စကားအသုံးအနှုနျးတှကေို ဘယျလိုအသုံးပွုရတယျ၊ ဘယျအခါမှအသုံးပွုရတယျ ဆိုတာကို သိထားဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတော့ ဘာသာစကားတဈခု (သို့) ယဉျကြေးမှုတဈခုမှာ စကားအသုံးအနှုနျးတဈခုဟာ ပုံမှနျအသုံး အနှုနျးဖွဈပမေဲ့ အခွားဘာသာစကား (သို့) ယဉျကြေးမှုအတှကျတော့ မယဉျကြေးသော အသုံးအနှုနျးဖွဈနနေိုငျလို့ပါပဲ။
I'm sorry, Excuse me (သို့) Pardon me ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးတှေ ဟာ အခကျြအလကျတောငျးဆိုခွငျး၊ အနှောကျ အယှကျပေးခွငျးနှငျ့ သဘောမတူခွငျး အစရှိတဲ့ မတူညီသော အခွအေနအေမြိုးမြိုးတှငျ ယဉျကြေးခွငျးကို ဖျေါပွရာတှငျ သုံးနိုငျသော အသုံးအနှုနျးမြား ဖွဈပါတယျ။
Sorry / Excuse me, do you know what the time is? (တဆိတျလောကျ၊ ဘယျနှဈနာရီလဲဆိုတာ သိပါသလား?)
I'm sorry, but I don't see how you expect us to finish by lunch time. (စိတျမရှိပါနဲ့ခငျဗြား။ ဒါပမေယျ့ ခငျဗြားက ဘယျလိုလုပျပွီး (ကြှနျတျောတို့ကို) ထမငျးစားခြိနျအမီ အဆုံးသတျ စခေငျြတယျဆိုတာကို သဘော မပေါကျဖူးဗြာ။)
Excuse me, but I never said I'd pay for everything. (အားတော့နာပါတယျ ဒါပမေယျ့ အားလုံးအတှကျ ငှရှေငျးပေးမယျလို့ ကြှနျတျော ဘယျတုနျးကမှမပွောခဲ့ပါဘူး။)
Excuse me, but there'saphone call for you. (ခှငျ့ပွုပါခငျဗြာ၊ ဒါပမေဲ့ ခငျဗြားအတှကျ ဖုံးလာနပေါတယျ။)
Excuse me foramoment, I have to makeaphone call. (ခဏလောကျ ခှငျ့ပွုပါဦး ကြှနျတျောဖုံးချေါစရာလေးရှိလို့ပါ။)
Pardon me , but those numbers aren't right. (စိတျမရှိပါနဲ့ ဒါပမေဲ့ အဒီဂဏနျးတှကေ မမှနျဘူး။)
Pardon me for interrupting, but there'saphone call for you. (နှောငျယှကျမိတဲ့အတှကျ တောငျးပနျပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ခငျဗြားအတှကျ ဖုံးလာနပေါတယျ။)
I'm sorry, Excuse me နဲ့ Pardon me တို့ကို တဈစုံတဈယောကျကို သူပွောလိုကျတဲ့ စကားကို နောကျထပျ ပွနျပွောဖို့ ယဉျကြေးစှာ တောငျးဆိုတဲ့အခါမှာလညျး အသုံးပွုပါတယျ။ Excuse me နှငျ့ Pardon me တို့ကိုတော့ အမရေိကနျစကားမှာ အဓိက အသုံးပွုပါတယျ။
Is this your coat? Excuse me/ Pardon me? (ဒါခငျဗြားကုတျအကငြ်္ီလား? ခငျဗြား/ပွနျပွောပါဦး။)
I'm sorry , what was your name again? (စိတျမရှိပါနဲ့ ခငျဗြားနာမညျပွနျပွောပါဦး ။)
သငျ့အနနေဲ့ ကြျောဖွတျသှားနိုငျဖို့ရာ တဈစုံတဈယောကျကို ဘေးဖယျပေးဖို့ ယဉျကြေးစှာ တောငျးဆိုတဲ့အခါ Excuse me နှငျ့ Pardon me တို့ကို အသုံးပွုပါသညျ။ Excuse me သညျ ဗွိတိသြှစကားအသုံးအနှုနျးဖွဈပွီး Pardon me ကတော့ အမရေိကနျစကားအသုံးအနှုနျးဖွဈပါတယျ။
I don't know, I see/take your point နဲ့ That's true တို့ကိုတော့ တဈစုံတဈယောကျနဲ့ အပွညျ့အဝမဟုတျပဲ အတိုငျးအတာတဈခုအထိသာ သဘောမတူကွောငျးကို ပွောလိုတဲ့အခါ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
It'll be boring. Oh, I don’t know. It might be fun. (အဲဒါက ငွီးငှစေ့ရာကောငျးလိမျ့မယျ။ အို မသိဘူးလေ ၊ ပြျောစရာကောငျးခငျြလညျး ကောငျးမှာပေါ့။)
I see your point , but I don't think there's anything we can do at the moment. (ခငျဗြားပွောတာကို လကျခံပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခုလောလောဆယျတော့ ကြှနျတျောတို့ဘာမှ မလုပျနိုငျဘူး ထငျတယျ။)
With (the greatest) respect, with all (due) respect နဲ့ I beg to differ တို့ ကတာ့ တဈစုံတဈယောကျနဲ့ သဘော မတူကွောငျး ပွောတဲ့အခါမှာ အလှနျယဉျကြေးပွီး ခနျ့တဲ့အသုံးအနှုနျး ဖွဈပါတယျ။
With all due respect , you're missing the point. (လေးစားပါတယျခငျဗြာ၊ ဒါပမေယျ့ ခငျဗြားနားလညျမှု လှဲနပေါတယျ။)
He argues that young people would benefit from parenting courses, I beg to differ. (လူငယျတှဟော သားသမီးပွုစုစောငျ့ရှောကျရေးသငျတနျးတှကေနေ အကြိုးကြေးဇူး ရနိုငျတယျလို့ သူကတော့ စောဒက တကျပါတယျ။ ကြှနျတျောအနနေဲ့ သဘောမတူကွောငျး ပွောပါစခေငျဗြာ။)
Actually ကိုတော့ တဈစုံတဈယောကျကို သူနဲ့သဘောမတူကွောငျး ယဉျကြေးစှာ ပွောလိုတဲ့အခါ (သို့) ထိုသူကို အမှနျပွုပွငျပေးလိုတဲ့အခါ အသုံးပွုပါတယျ။
I find Jamesabit dull. He's actually very nice when you get to know him. (ဂြိမျး(စ)က နညျးနညျးတော့ ငွီးငှဖေို့ကောငျးတယျလို့ ကြှနျတျောထငျတယျ။ သူနဲ့ရငျးနှီးလာတဲ့အခါ သူဟာ တကယျတော့ သဘောကောငျးတဲ့သူ တဈယောကျပါ။)
That Picasso is amazing. Actually it's by Braque. (အဲဒီပီကာဆိုရဲ့ အဲဒီပနျခြီကားက အံ့သွစရာကောငျးလိုကျတာ။ တကယျတော့ အဲဒါဘရကျ(ခ)ဆှဲတာ။)
I'm afraid ကတော့ တဈစုံတဈယောကျကို စိတျမကောငျးဖွဈစမေဲ့ (သို့) စိတျပကျြစမေဲ့ (သို့) စိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈစမေဲ့စကားကို ပွောရာတှငျ အသုံးပွုသော ယဉျကြေးတဲ့စကား အသုံးအနှုနျးဖွဈပါတယျ။
Things haven't been going well here, I'm afraid. (စိတျမကောငျးပါဘူး။ ဒီမှာတော့ အရာရာတိုငျးဟာ အဆငျမပွဖွေဈနတေယျ။)
I'm afraid that I can't accept this job. (စိတျမကောငျးပမေဲ့ ဒီအလုပျကို ကြှနျတျောလကျမခံနိုငျပါဘူး။)
I'm afraid to say that I found the book very dull. (အားနာပမေဲ့ စာအုပျက ပငျြးစရာကောငျးတယျလို့ ပွောရမှာပဲ။)
Did he forget to do it? I'm afraid so. (သူလုပျဖို့မသှေ့ားသလား? စိတျမကောငျးပမေဲ့ ဟုတျပါတယျ။)
Will John be there? I'm afraid not. (ဂြှနျရောအဲဒီမှာ ရှိမှာလား? စိတျမကောငျးပါဘူး၊ ရှိမှာမဟုတျဘူး။)
Macmillandictionaryblog.com မှ Liz Potter ၏ Ways of being polite မှ ကောကျနှုတျ ဘာသာပွနျဆိုထားတာဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by saiheart on June 25, 2014 at 9:55
Permalink Reply by Thida Aung on October 31, 2014 at 12:08
So many thank, Sir
Permalink Reply by Christinamoe on November 27, 2014 at 15:37
Permalink Reply by ko lay on December 3, 2014 at 17:28
Thanksamillion!! Please post more like this.
Permalink Reply by Shwe Sin on December 28, 2014 at 21:43
Permalink Reply by lay pya on February 6, 2015 at 21:29
Permalink Reply by Mr. Tho Sit Naing on February 13, 2015 at 14:09
This is very nice for me!
Permalink Reply by arkarphyoe on May 28, 2015 at 20:23